I-YSZ zirconia tube ceramic square China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Ama-Tuber Ceramic > I-Zirconia Tube ye-Ceramic > I-YSZ zirconia tube ceramic square
I-YSZ zirconia tube ceramic square
Zirconia tube ceramic square
I-tube ye-zirconia ye-ceramic square ingasetshenziswa ekwakhiweni kwethu. Ngokuvamile, ifakwe umjovo wokubunjwa we-ceramic, bese uxoshwa ukuba ube yimikhiqizo eqediwe. Ngezinye izikhathi, kuyadingeka ukuthi kudingeke ukucaca okuphezulu kakhulu, sizoqhubeka nomzimba wangaphakathi, wangaphandle nokude ngokusebenzisa ukugaya ngokunembile kanye nokufakelwa kwe-CNC ukuba kube yinkomba.
Kungakhathaliseki ukuthi yiyiphi icala, noma yi-cost down projects. Sicela uze lapha nathi, sikholwa ukuthi sikwazi ukukusiza.